Ny Apple TV no mbola haino aman-jery multimedia takiana | Avy amin'ny mac aho
Apple TV no mbola mpilalao haino aman-jery farany ambany takiana
Na dia fahita lavitra aza ny fahita fahitalavitra manolora fidirana amin'ireo sehatra fanaovana video mivantanaTsy ny olon-drehetra no mampiasa azy ireo, manankina ity fitaovana ity amin'ny fitaovana haino aman-jery manan-tsaina toa ny Apple TV, Fire TV, Roku, Chromecast ... Araka ny tarehimarika navoakan'i Above Avalon, ny anjaran'ny Apple TV dia 12,5% fotsiny.
Na eo aza ny quota ambany toy izany dia tratra izany mihoatra ny Chromecast an'i Google, izay nihoatra ny Apple taona lasa izay ny fitaovany. Tahaka ny efa nitranga nandritra ny taona maro, ireo fitaovana manaparitaka an'io fanasokajiana io dia ny maodelin'i Amazon sy Roku.
Fizarana tsena ho an'ireo mpilalao haino aman-jery mivantana (via Parks Associate).
- Mariho ny sombintsombiny. Ilay Wild West any ivelany any.
- ~ Ny fizarana 15% ho an'ny boaty Apple TV dia mety amin'ny tsena mizarazara. pic.twitter.com/u9dhXN1x0J
- Neil Cybart (@neilcybart) Jolay 7, 2021
Ny maodely Roku sy Amazon dia mifaninana toa ny wild West Hodinihina izany, araka ny filazan'i Neil Cybart avy any Ambony Avalon ao amin'ny sioka navoakany izay misy graf miaraka aminy fizarana tsena amin'ity karazana fitaovana ity.
Tsy misy mpandresy mazava eo amin'ity tsena ity, toy ny amin'ny karazana fitaovana hafa toa ny Apple Watch, fitaovana izay manjakazaka amin'ny tsenan'ny smartwatch manana tombony 20% noho ny mpifaninana faharoa.
Navoaka i Apple ny Apple TV voalohany tamin'ny Janoary 2007 ary hatramin'ny vao tsy ela akory izay dia nilaza i Tim Cook fa fialamboly izy io. Niditra tao amin'ny tsenan'ny haino aman-jery Roku herintaona taty aoriana, tamin'ny 2008, raha ny fahatongavan'i Amazon dia tsy nitranga raha tsy tamin'ny 2014. Google dia nanao izany herintaona talohan'io, tamin'ny 2013.
Na eo aza ny zokiny indrindra amin'ny tsena, ny zokiolona dia tsy nadika tamin'ny toerana ambony toy ny mahazatra. Tamin'ny nanombohan'ny Apple TV 4K ny taranaka faharoa, dia nanararaotra ny Apple fa tsy hanatsarana ny processeur fotsiny, amin'ny alàlan'ny A12 Bionic, fa koa nanamboatra ny lavitra Siri, manala ny trackpad izay avy am-pelatanan'ny Apple TV fahefatra. taranaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Apple TV no mbola mpilalao haino aman-jery farany ambany takiana
Samsung, Intel, Xiaomi, Ericsson, Nokia ary ny maro hafa dia manamafy ny fahatongavany ao amin'ny MWC 2022
Navoaka ho an'ny mpamorona ny MacOS 5, watchOS 11.5, ary tvOS 7.6 beta 14.7